font display on google chrome, windows 8 - MYSTERY ZILLION
font display on google chrome, windows 8
November 2012 edited November 2012 in Help Desk
ဝင်းဒိုး ၈ ရဲ့ ဂူဂယ်ကရုန်းမှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ရော ယူနီကုတ်ဖောင့်ပါ facebook သုံးရင် မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ စာလုံးတစ်ခုမှကို မပေါ်တာပါ။ ပုံမှန် ဝက်ဆိုဒ်တွေ ကြည့်ရင်ကတော့ ပေါ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ဝက်ဆိုဒ်တွေ ကျတော့ စာလုံးတစ်ခုမှကို မပေါ်ဘူး။ ဆက်တင်မှာရော ပြင်ကြည့်ပြီးပါပြီ။ ဖားရားဖောက်စ်မှာကတော့ ဇော်ဂျီရော ယူနီကုတ်ရောပေါ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ သူငယ်ချင်းတို့ရော ဖြစ်ဖူးလားလို့။ နောက် ဝင်းဒိုး ၈ မှာ Myanmar Text ဖောင့် ပါလာတော့ နောက်ဆို ဖောင့်တွေ သီးသန့်သွင်းစရာ မလိုတော့ဘူးလား။ ကျေးဇူး။
November 2012 edited November 2012 Registered Users
You can use " Stylish " extension from Chrome Webstore.
Addanew style for Zawgyi like this :: http://i.imgur.com/kW3QPl.png
Createanew style and replace Zawgyi-One with Myanmar Text
From Stylish option, you can disable or enable Unicode/Zawgyi according to your need. :: http://i.imgur.com/NmYNol.png
Or if you want to use only one, you can edit custom.css in your chrome profile >> user stylesheets >> custom.css
Thank you ... !! it work great!!..